Vaovao - loko mena akaiky
Pigmenter fluorescent Uv
Loko milentika NIR
Loko mena mena be
Vovon-drakitra mampiova fo
Akaiky loko mena
Ny loko vita amin'ny infrared akaiky dia mampiseho ny fitrohana hazavana ao amin'ny faritra infrared akaiky 700-2000 nm. Ny fitrohan'izy ireo mafy dia matetika avy amin'ny famindrana fiampangana loko mainty na metaly sarotra.
Ireo fitaovam-pifandraisana akaiky infrared dia misy loko cyanine manana polymethine mihalava, loko phthalocyanine miaraka amina foibe vy misy aliminioma na zinc, loko naphthalocyanine, kompana nickel dithiolene miaraka amina geometry-planar square, loko squarylium, analogue quinone, compound diimonium ary azo derivatives.
Ny fampiharana mampiasa ireo loko voajanahary ireo dia misy ny mari-pamantarana fiarovana, ny lithography, ny haino aman-jery optika ary ny sivana optika. Ny fizotran'ny taratra laser dia mitaky loko miloko infrared akaiky izay manana fanentanana mora tohina mihoatra ny 700 nm, solubility avo lenta ho an'ny solvents organika mety, ary fanoherana hafanana tena tsara.
In mba hampitomboana ny fahombiazan'ny fiovan'ny herin'ny sela solar organika, ilaina ny mahomby eo akaikin'ny loko infrared, satria ny hazavana dia misy hazavana akaiky infrared.
Ankoatr'izay, ny loko infrared akaiky dia antenaina ho biomaterial ho an'ny fitsaboana ara-simika sy ny fakana sary ao anaty vivo amin'ny alàlan'ny fampiasana trangan-javatra mamirapiratra any amin'ny faritra akaiky infrared.
Fotoana fandefasana: Jan-25-2021